Gaafilee 8 namoonni jireenyatti milkaayan hundi ufgaafatan; atis kan ufgaafachuu qabdu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Gaafilee 8 namoonni jireenyatti milkaayan hundi ufgaafatan; atis kan ufgaafachuu qabdu
Gaafilee 8 namoonni jireenyatti milkaayan hundi ufgaafatan; atis kan ufgaafachuu qabdu
Gaafilema kana ufgaafachuun nutis jireenya keenyaaf deebii haabarbaannuu
Daandiin gara guddinaafi milkiitti nugeessan heddu. Isaan keessa inni tokko namoota jireenyatti (dirra caalatti iinagdeen jechuu kiyya) milkaayan irraa waa ergifachuudha. Maallaqa hinkennan ta’a, garuu amala isaanii akka hindhaalle kan nugodhan natti hinfakkaatu. Amala isaanii barachun, sanbodas ifaa jireenyaa godhachun nutis gufuu rakkoo moo’anne, tabba baanee akka jiraannuuf nugargaara.
Namoonni jireenyatti milkaayan [milkiin namoota garagaraatiif hiika addaddaa qabachuun nimalaa] gaafilee asii gaditti tarreeffaman ufgaafatu- ammas irra deddeebi’aa. Nutis yoo ufgaafanne, afaan birootiin isaaniin morkine, rakkoo qabaa? Natti hinfakkkaatu. Mee haa yaalluu.
Sa’aa meeqatti hirribaa kaata?
Namoonni jireenya keessatti milkii gurguddoo gonfatan, hundi jechuun nidanda’amaa, sinbira ganamaati.
Murtee isa kam dabarsuu dhiisuu qabda?
Murtee heddu dabarsuun humna heddu gaafata. Humna kee qusachuuf murtee guyyatti dabarsitu hir’isutu sirraa eegama.
Sodaa waan hawwituufi hojjachuu feetu hunda akka hinraawwanne sigodhan addaan coktee beekuun dirqama. Erga gargar baastee beektee booda irratti hojjachuu qabda, dandeettii kee guutummatti dhimma itti bahuuf. Wonti namni tokko dhugatti fedhu sodaan gama kaan jira jedhama.
Galiin kee inni guddichi maaliidha?
Kaayyoo yeroo dheeraa qabaachuun barbaachisaadha. Ta’us, namoonni milkii gurguddaa galmeessisan kayyoma hara’aa ykn yeroo gabaabaa adda baasuudhaan xiyyeeffannaa guddaa itti laatanii hojjatu.
Wonti cimaan hojjataa hinjirre maaliidha?
Waan jaalataniifi qalbiin namaa itti jirtu hojjachuun baay’ee barbaachisaadha. Yeroo tokko tokko garuu wonti milkiin nugayu gidaara cimaa nuti dhiibuuf hinqophoofne duuba jira.
Wontoonni salphaan ati hedduu hojjataafi yeroo irratti galaafataa jirtu maaliidha?
Waan ciccimo hojjannaan, lallaaffoon ufii ufhojjatau jedhama. Yeroofi humna kee waan ciccimoofi dhiboo ta’an sarara qabsiisuu irratti galaafadhu. Wontoota salphaa ta’an sa’aa kamittuu hojjachuu wonti sidhoorgu tokko hinjiru. Jireenyi isa waa ugguuf.
Dhugumatti isa san bituun sirra jiraa?
Baasii hir’isuun daandii saffisaan ittiin duroomuun danda’amau; bu’aa guddisuu irra. Kuni bu’uura diinagdeeti[business 101]. Heerrega salphaa kana namooni hundi kan hubachuu dadhaban.
Jijjiirama fudhatamuu qabu akkamitti raawwatta?
Jijjiramni bu’uura waan akka salphatti dhufuu miti. Sababni isaas namoonni teessoo itti oo’e irraa olka’uun waan itti ulfaatuuf. Yeroo dhimma jijjiirraa irrati bobbaanu, raawwiin isaa dhawaata dhawaataan ta’utu irra jira. Kana jechuunis irra rafuu akka hintane haa hubatamuu. Gaafilee biroos itti dabaluun nidanda’ama.
gaafilee namoota milkaayani
Previous articleAmaloota 10 sadarkaa ufitti amaniinsa guddaa ittiin horachuun danda’amuun
Next articleDaandii 8 ijoollee gamnummaafi gammachuun guutaman ittiin guddisuun danda’amu